प्रस्तावित राजदूत सुवेदी भन्छिन्– ‘सबै जना जान्नेबुझ्ने भएरै राजदूत भएका होइनन्’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
प्रस्तावित राजदूत सुवेदी भन्छिन्– ‘सबै जना जान्नेबुझ्ने भएरै राजदूत भएका होइनन्’
‘सम्बन्धकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ मेरो घरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर ५ सय मिटर मात्रैको दूरीमा छ ।’
जेष्ठ २, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — विभिन्न ११ देशमा राजदूत नियुक्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार नाम सिफारिस गरेकोमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित सुमित्रा सुवेदीको विस्तृत परिचय भने हत्तपत्त फेला परेन । ‘म मोफसलमा बस्ने राजनीतिक कार्यकता हुँ, केन्द्रमा नभएकैले तपाईंले परिचय नपाएको होला’ भन्दै शनिबार झापाको दमकबाट फोन सम्पर्कमा आएकी ६० वर्षीया सुवेदीले आफूलाई ‘पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता’ भन्न रुचाइन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्नैका लागि विद्यालय तथा क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्न छाडेको बताउने सुमित्रा सुवेदी (भण्डारी) राजदूतमा आफ्नो नाम प्रस्तावित भएपछि आफैं छक्क परेकी रहिछन् ।
कूटनीतिको सारभूत पक्षबारे जानकार नभएकै अवस्थामा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध वा सहयोग–समन्वयको काम गर्न मुस्किल पर्छ कि भन्ने लाग्दैन ?
काम गर्न सक्ने–नसक्ने भन्ने कुरा मुलुकको राजनीतिक स्थिरतामा पनि भर पर्छ । यता आफ्नो घरमा राजनीतिक स्थिरता नभईकन बाहिरबाट कुनै पनि मुलुकले लगानी गर्न वा सहयोग परिचालन गर्न कठिनाइ मान्छन् नै । अस्थिरताको अवस्थामा कुनै पनि प्रोजेक्ट दिन अरू मुलुक सशंकित हुन्छन् नै । कुनै पनि काम गरिसकेपछि जस उनीहरूले पनि लिन खोज्छन्, यो स्वाभाविक छ । त्यो जस लिने सम्भावना भएन र योजना लागू गर्न सक्ने सम्भावना भएन भने अस्थिरतामा लगानी गर्नुको अर्थ केही छैन भन्ने स्वभावत: भइहाल्छ । यस कारण काम गर्ने/नगर्ने कुरामा कुनै राजदूतलाई दोष दिनुभन्दा पनि घरभित्रकै राजनीतिक स्थायित्वलाई दोष दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । फेरि कूटनीतिक स्थिरताका लागि पनि राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व चाहिन्छ नै ।
मान्छे जन्मँदैखेरि केही पनि जानेर वा बुझेर आएको हुँदैन । सबैथोक सिकेर जान्ने कुरा हो । सधैंभरि यही लोकल ठाउँमा बसेर यहीँ वरपरको मात्रै कल्पना गरेर पनि हुँदैन । फेरि सबैजना जान्ने–बुझ्ने भएर मात्र राजदूत बनेर गएका त होइनन् होला । एउटै मान्छेमात्रै कुनै मुकाममा राजदूत भएर बसिरहने कुरा पनि आउँदैन, नयाँ मान्छे पनि जानैपर्छ । कतिपय कुरा गएरै सिकिन्छ । डेनमार्क भनेको मानवअधिकार तथा विकास समृद्धिका अनेक आयामका कुराले चिनिएको मुलुक हो । त्यस कारण सिक्नमा केही समस्या हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । जहाँसम्म भाषाको कुरा छ, भाषा भनेको आफूले बोलेको कुरा अरूलाई बुझाउन सक्ने माध्यम मात्रै हो । बुझाउन सक्ने कन्फिडेन्स हुनुपर्‍यो, त्यो मसँग छ । अंग्रेजीमा फरर्र बोल्दै जाने कुराहरू भनेको सिक्दै जाने कुरा पनि हो । मेरा कति कमजोरी होलान्, मसँग कति ‘कन्फिडेन्स’ पनि होला । तर, यत्ति हो, दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा केही काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास भने मसँग छ ।
अब कसले, के–कसरी बुझ्छ, म त्यो भन्न सक्दिनँ । तर सम्बन्ध त जसको जहाँ पनि हुन सक्छ । त्यसै भन्ने हो भने यहाँ (दमक) मेरो घरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर ५ सय मिटर मात्रैको दूरीमा छ । हेर्नुस्, २०३६ सालमा धरानमा क्याम्पस पढ्दैदेखि म विद्यार्थी आन्दोलनको राजनीतिमा होमिएकी हुँ । म आफ्नै राजनीतिक योगदान, पहिचान र करियर लिएर अगाडि बढेकी महिला हुँ । बरु, यस्तै अनेक सम्बन्धका कारण मेरो योगदान ओझेलमा परेको हो भन्ठान्छु म । कुनै सम्बन्धका कारण मैले कतै ठाउँ नपाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी राजनीतिमा लागिरहनेका हकमा के हुन्छ भने बेलाबेलामा कुनै पदका लागि नाम चल्छ, फेरि सेलाउँछ । फेरि कतै नाम आउँछ, फेरि ब्याक हुन्छ । कतै मसँग सम्बन्धको कुरा आउँछ, कतै मेरो मोफसल बसाइको । यो सबै खेप्दै–खेप्दै म यहाँसम्म आएकी हुँ । मेरा लागि पनि अहिलेको निर्णय आकस्मिकझैं छ । जे होस्– केन्द्रको नजरमा परिएछ भन्ने भएको छ । यस्तो निर्णय र प्रस्तावनामा विरोध भएन भने फेरि रमाइलो पनि हुँदैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७८ १२:५०
कोरोनाबाट आइतबार हेटौंडामा ४ जनाको मृत्यु
जेष्ठ २, २०७८ सुवास विडारी
मकवानपुर — हेटौंडा अस्पतालमा आइतबार कोरोना संक्रमणबाट चारजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा तीनजना महिला र एकजना पुरुष रहेका छन् ।
हेटौंडा अस्पतालको कोभिड वार्डमा उपचाररत हेटौंडा–१४ की ७४ वर्षीया, ४८ वर्षीया तथा हेटौंडा–८ की ६१ वर्षीया महिला र हेटौंडा–२ चौकीटोलका ६४ वर्षीय एक पुरुष गरी ४ जना कोरोना संक्रमित बिरामी मृत्यु भएको हो । मृतक चारै जनाको वैशाख २६ गते कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो ।
उनीहरु श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि हेटौंडा अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । ‘मृतक सबैमा अन्य रोग पनि थियो । विशेष गरी श्वासप्रश्वासमा समस्या थियो,’ अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सागर काफ्लेले भने ।
उनका अनुसार अस्पतालको कोभिड वार्ड पूर्णरुपमा संक्रमितको चापले भरिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरबाट मकवानपुरमा मृत्यु हुनेको संख्या २८ पुगेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७८ १२:११